Misintona maimaimpoana maodely maherin'ny 200 amin'ny Apple Watch amin'ny PSD | Vaovao IPhone
Imbetsaka isika dia mila mametraka rakitra amin'ny endrika PSD ho an'ny tetikasanay amin'ny Google: raha ny fanatontosako ny sary dia misy isaky ny lahatsoratra. Indraindray tsy hitako ny sary tonga lafatra ka mila manova ny fisie PSD amin'ny fomba tsotra aho. Betsaka ny fisie amin'ity karazana ity, indrindra ireo izay misy ifandraisany amin'ny fampifandraisan'ny mpampiasa fitaovana sasany (ohatra) izy ireo dia noforonin'ireo mpampiasa sy mpamorona izay manolotra an'io votoaty io ho an'izao tontolo izao maimaim-poana (na tsia), toy ny fonosana modely izay hatolotro anao eto ambany. Ity fonosana maodely maherin'ny 200 an'ny Apple Watch ity misy maimaim-poana izany; Izy ireo dia maodely izay azontsika ampiasaina ho tombontsoantsika manokana ary, ohatra, azonao atao ny mamoaka amin'ny bilaoginao. Amin'ny sary lohany amin'ity lahatsoratra ity dia manana santionany amin'ny iray amin'ireo maodely ireo ianao.
UI8 dia mamoaka modely Apple Watch PSD maimaim-poana
Ho an'ireo very kely dia hapetrako amin'ny toe-javatra ianao. ny fisie amin'ny endrika PSD Izy io dia rakitra izay azo sokafana ao amin'ny Photoshop, programa noforonin'i Adobe izay ahafahantsika mamorona rakipeo, manatsara sy manitsy sary, ankoatry ny zavatra maro azo atao. Ity rakitra ity PSD navoakan'i UI8 misy maodely maherin'ny 200 Apple Watch mizara sokajy maromaro:
Isaky ny sokajy ireo dia misy maodely roa ambin'ny folo miaraka amin'ny Fifanarahana amin'ny mpampiasa Apple Watch. Ny zavatra tsara indrindra momba an'ity atiny ity izay naharitra ora 300 mahery dia ny vidiny: tena malalaka ary miaraka amin'ny fahazoan-dàlana momba ny zon'ny mpamorona, izany hoe izay rehetra ao anaty rakitra .PSD dia azo ampiasaina hamoronana vola amin'ny Internet aza.
Amin'ireto modely azo ovaina ireto dia azonao atao ny mamorona ny forongonao ho an'ny bilaoginao, ny sarinao na ny asanao ... Raha misintona azy ianao dia mila miditra fotsiny Tranokala ofisialy UI8 ary sokafy ny fisie miaraka amin'ny kinova Adobe Photoshop izay anananao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Apple products » Apple Watch » Fampidinana maimaimpoana maodely maherin'ny 200 Apple Watch amin'ny PSD